काठमाडौँ, २७ माघ - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वसन्त पञ्चमीका अवसरमा आज बिहान ८ः२४ बजेको शुभसाइतमा वसन्त श्रवण गर्नुभयो । हनुमानढोका दरबारस्थित नासलचोकमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिसमक्ष हनुमानढोका हेरचाह अड्डाका मूल पुरोहित देवराज अर्यालले अभिषेक, टीका, माला र फूलप्रसाद प्रदान गर्नुभएको
सोनाम ल्होछारका दिन ३ प्रदेशमा विदा
हेटौडा । प्रदेश नं ३ ले सोनाम ल्होछारका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। तामाङ समुदायको ल्होछारका अवसरमा माघ २२ गतेका दिन विदा दिने निर्णय प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गरेको विज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिएको छ । सो दिन ३ नं प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरु बन्द रहनेछ।
काठमाडौं । राजनीतिक परिवर्तनका सम्वाहक शहिदको सम्मान नहुँदा आफूहरूलाई पीडा थपिने शहिद परिवारका सदस्यहरूले बताएका छन् । जनआन्दोलनका घाईते तथा सहिद परिवारले आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा राज्यले आफूहरुलाई बेवास्ता गर्दा पीडा थपिएको अनुभूति हुने बताए । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शहिद दिवसको अवसर
हुम्ला र डोल्पाका पूर्ण अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा सहुलियत
दिपेन्द्र शर्मा/ कर्णाली प्रदेशको उद्योग ,पर्यटन ,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यातायातको पहुँचबाट टाढा रहेका डोल्पा र हुम्ला जिल्लाका पूर्ण अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकलाइ हवाई टिकटको भाडामा सहुलियत दिने भएको हो । प्रदेश सरकारले यसका लागि रू. एक करोड वजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका यातायातले छुन नसकेका
काठमाडौं - पश्चिमी वायुको प्रभावले देशका अधिकांश स्थानमा बदली र वर्षासँगै उच्च हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले आगामी तीन दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्दै शनिबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रका
शहीद सप्ताह शुरु, बिहीवार शुक्रराज शास्त्रीको स्मरण
काठमाडौं । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जीवन आहूति दिने शहीदको स्मरणमा बिहीवारदेखि शहीद सप्ताह शुरु भएको छ । प्रत्येक वर्ष माघ १० देखि १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने गरिन्छ । सप्ताहको पहिलो दिन बिहीवार शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिइएको टेकुस्थित पचलीमा उनलाई बिहीवार स्मरण
दूध मानव स्वास्थ्यका लागि पोसिलो र प्रोटिन युक्त पदार्थ मानिन्छ । त्यसै कारण विभिन्न जनावरको दूध खाने प्रचलन छ । खासमा गाई र भैंसीको दूध निकै स्वास्थ्यबर्धक रुपमा लिने गरिन्छ । तर, गाई र भैंसीको दूधमा कुन चाहिँ वढी लाभदायी छ भन्नेबारे प्रायः मानिस अन्यौलमा छन् । देख्दा दुबै उस्तैं छन्, स्वाद पनि करिब–करिब
निर्मला पन्तको हत्या छानबिनमा शंका नगर्नोसःआईजिपी खनाल
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले निर्मल पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न जोकाही भएपनि नछाडिने बताएका छन् । निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरी इमान्दार भएर लागिरहेको भन्दै अनुसन्धानमा शंका नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजना अध्यादेश–२०७५ गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवम् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव रुपनारायण भट्टराईले अध्यादेशप्रति कर्मचारीको तर्फबाट आएका गुनासालाई आत्मसात गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा
उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्य नाथ जनकपुरमा
जनकपुर । भारतीयको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ जनकपुर आइपुगेका छन् । राम जानकी विवाहको अवसरमा अयोध्याबाट जन्ति लिएर नेपाल आएका उनले बुधबार बिहान राम जानकी मन्दिरमा विशेष पूजाअर्चना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आदित्य नाथलाई जनकपुर विमानस्थलमा प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले
ओली सरकारको राजीनामा माग
काठमाडौं । आजाद जनता पार्टी नेपालले एशिया प्यासिफिक सम्मेलनको बहानामा नेपाललाई क्रिश्यिचन राष्ट्र घोषणा गर्न लागिएको भन्दै वर्तमान सरकारले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीले नेपाल र नेपालीको अपमान हुने, धर्म, संस्कृति तथा परम्परामाथि
‘यशुकी छोरी’को प्रधानमन्त्रीलाई १ लाख डलरको पुरस्कार
काठमाडौं । युनिभर्सल पिस फाउण्डेसन (युपीएफ) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १ लाख डलर नगद सहित पुरस्कृत गरेको छ । आइतवार सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलन– २०१८ मा विवादास्पद युनिफिकेसन चर्चकी धर्म गुरु हाक जा हान मुनले प्रधानमन्त्रीलाई ‘लिडरसिप एन्ड गुड गभर्नेन्स अवार्ड’बाट पुरस्कृत गरेकी हुन्
एशिया प्यासिफिक सम्मलेनको प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन
काठमाडौँ । एसिया प्यासिफिक सम्मेलन –२०१८ राजधानी काठमाडौंमा शनिबारबाट सुरू भएको छ। युनिभर्सल पिस फेडरेसनको आयोजना गरेको कार्यक्रम दुई दिनसम्म चल्नेछ । सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्मेलन उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलन सफलताको शुभकामना दिँदै सामसामयिक विषयमा विश्व परिवेशमा
काठमाडौ । सरकारले मंगलबारदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । योजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा यो सरकारको नयाँ कदमले ‘नयाँ युगको आरम्भ’
काठमाडौं । प्रथम जननिवार्चित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको जीवनका विभिन्न पाटा र विद्रोहका आयाम समेटिएको पुस्तक ‘बीपीको विद्रोह’ बजारमा आएको छ । पत्रकार एवम् पत्रकारिताका उप–प्राध्यापक जगत नेपालले लेखेको उक्त पुस्तकको शुक्रबार पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लोकार्पण गरे । पुस्तक
काठमाडौं । लामो समयदेखि जिल्लामा (साविकका) स्थानीय शान्ति समितिमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीलाई शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्दै नियोजित रुपमा सेवाबाट हटाईएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा सो समितिमा कार्यरत कर्मचारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप
वरिष्ठ धानविद् बस्नेत सम्मानित
काठमाडौं । वरिष्ठ धानविद् भोलामान सिंह बस्नेत सम्मानित भएका छन् । नेपाल टाइगर साप्ताहिक पत्रिकाले २७ औं वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा शनिबार बस्नेतलाई सम्मान गरेको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवम् मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले ५२ बर्ष देखि कृषिक्षेत्र र विशेष गरी
काठमाडौँ । आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजाआजासहित अघ्र्य दिई चार दिन लामो छठ पर्वलाई समापन गरिएको छ । कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने पर्वको मुख्य दिन मङ्गलबार अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजाआजासहित अघ्र्य दिइएको थियो । उपत्यकाका गुह्येश्वरी, कमलपोखरी, गहनापोखरी, शङ्खमूल, थापाथली, वाग्मती, विष्णुमती
काठमाडौं । आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर देशका विभिन्न भागमा छठ पूजा गरिँदै छ । पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका तराईबासीले छठ पूजालाई विशेष पर्वका रुपमा मनाउछन् । केही वर्षअघि तराईबासीले मात्रै मनाउँदै आएको छठ पर्व बिस्तारै पाहाडी समुदायले पनि मनाउन थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका
काठमाडौंँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय विभूति तथा समाज सुधारक फाल्गुनन्दले समाजिक विकृति, विसङगति हटाउन लागि सुरु गर्नुभएको अभियान सधैँ स्मरणीय रहेको बताउनुभएको छ । फाल्गुनन्दको १३४ औं जन्म जयन्तीका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समाज सुधारको लागि फाल्गुनन्दले
काठमाडौँ । यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई, गोवद्धन, गोरुको पूजाआजा गरी मनाइँदै छ । गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो । गौमाताको पूजा गरेमा पुण्य प्राप्त हुने आस्था छ । गाईको पूजा गरी आजका दिन मीठामीठा परिकार खान दिएमा गाईबाट पाइने शुद्धता सधैँ प्राप्त हुने धार्मिक
काठमाडौँ–यमपञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन आज साँझ ऐश्वर्य, धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजाआराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मीपूजा मनाइँदैछ । सफासुग्घर र लिपपोत नगरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने मान्यताका आधारमा आज बिहानै घर सफासुग्घर र लिपपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई
काठमाडौं । तिहारको दोस्रो दिन मानिसको निकटको साथी एवम् रक्षक वफादार प्राणी कुकुरलाई मीठामीठा खानेकुरा दिने र पूजा गरेर मनाइँदैछ । कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरलाई मीठामीठा परिकार खान दिए यमराजको ढोकामा द्वारपालका रुपमा बस्ने श्याम र सबल नामका कुकुरले यमलोक जाँदा बाटो छोडिदिने धार्मिक
काठमाडौं । हिन्दुहरूको दोस्रो महान चाड तिहार सोमबार (आज) बाट शुरु भएको छ । तिहारको पहिलो दिन काग तिहार पर्दछ । हरेक वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि शुक्ल द्वितीयासम्म ५ दिन मनाइने भएकाले तिहारलाई यमपञ्चक पनि भन्ने प्रचलन छ । यमपञ्चकको पहिलो दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीमा काग तिहार मनाइन्छ । यस दिन कागलाई
बडादशैंको सुरू,आज घटस्थापना
काठमाडौँ । हिन्दुहरूको महान चाड बडादशैं बुधबार (आज) बाट सुरू भएको छ । बडादशैंको पहिलो दिन मूलघरको पूजाकोठामा घटस्थापना गर्दै जमरा राख्ने प्रचलन छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले बिहान ७ः१५ बजे घटस्थापनाको शुभ साइत तोकेको छ । पूजा कोठाको भूइँलाई गाइको गोवरले लिपेर चोखो पारी चोखो वालुवा वा माटोमाथि
काठमाडौं । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट तथा बम दिदीबहिनी बबिता र रोशनीमाथि पुनः छानबिन गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्देशन दिएको छ । आयोगले घटनाको छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो निर्देशन दिएको हो । आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीका अनुसार कञ्चनपुर
काठमाडौं–श्रीकुमारी रथयात्रा सोमवार हुँदैछ । यसलाई इन्द्रजात्राको आकर्षणका रुपमा लिइन्छ । गुठी संस्थान काठमाडौँ शाखा प्रमुख बैकुण्ठ रेग्मीका अनुसार दिउँसो ४ बजे श्रीकुमारीलाई रथारोहण गरेर ४ः३० बजे जैशिदेवलबाट लगनटोलतर्फ पहिलो रथयात्रा चलाइने छ । यस पटक मञ्जुश्री नकमहाविहार (ओमवहाल) सँग आवद्ध
पाल्पामा पहिलो ‘अदालती’ विवाह
पाल्पा । नयाँ मुलकी ऐन संहिता बमोजिम पाल्पा जिल्ला अदालतमा विवाह सम्पन्न भएको छ । मुलुकी संहिता २०७४ को दफा ७७ बमोजिम जिल्ला अदालत पाल्पाबाट पहिलो विवाह भएको हो । तानसेन नगरपालिका– ६ बस्ने ३४ बर्षिय सरोजराज शाक्य र काठमाडौं महानगरपालिका– ३ बस्ने २८ बर्षिया उप्पलवणा शाक्य बीच जिल्ला अदालत पाल्पामा
काठमाडौं । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दोषी रहेको आरोप राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका वरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्णले लगाएका छन् । घटनाको छानबिनमा प्रहरीको गम्भीर त्रुटि हुँदापनि उनीहरूलाई कारबाही नगर्नुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा
काठमाडौं । हिन्दु नारीहरूले सप्त ऋषिको पूजा आराधना गरी आज ऋषि पञ्चमी पर्व मनाइरहेका छन् । भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनमा पर्ने आजको दिन बिहानै ब्रतालु महिलाले नदी, खोला, ताल, तलैया र पोखरीमा गई ३६५ दत्तिवनले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो र खरानी लगाई स्नान गर्ने गर्दछन् । रजस्वलाका समयमा छाइछुइलगायत कुनै